TOP Colours Pantone Institute Lohataona-Fahavaratra 2015 | Famoronana an-tserasera
TOP Colours Pantone Institute lohataona-fahavaratra 2015
Izahay dia tsy nandinika ny fironana amin'ny haavon'ny loko nomen'ny Pantone Institute ao amin'ny tatitra isan-taona. Ity 2015 ity dia hampiavaka azy amin'ny fandraisana ireo vanim-potoana mafana kokoa amin'ny taona amin'ny endriny mafana sy miaraka amin'izay. Azonao atao ny misintona ny tatitra ofisialy avy amin'ity rohy manaraka ity izay misy sary-tsipika, teny nalaina ary sarin'ireo mpamorona no niraikitra. Izy io dia antontan-taratasy iray izay tsy tokony tsy raharahian'ny vondron'ireo mpamorona ary tena hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fananganana mirindra amin'ny fandanjalanjana ny fisoratana anarana izay mihetsika ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny kanto sy sary.
Ireo loko aseho ao amin'ny Tatitra PANTONE ny Color dia nalaina ary voafantina tao amin'ny katalaogin'i Pantone Fashion + Home Color System, ilay rafitra be mpampiasa sy be mpahalala indrindra amin'ny tontolon'ny loko eo amin'ny sehatry ny lamaody sy ny endrika famolavolana rehetra. Isaky ny gara, Pantone dia manome karazana fanadihadiana ho an'ireo matihanina amin'ny Herinandron'ny lamaody any New York ary manangona vaovao momba ny loko misy indrindra sy ampiasaina amin'ny fanangonana ary mazava ho azy ny dikany, ny fototra ary ny psikolojia ny lokony. Ireo fampahalalana rehetra ireo dia handrafitra izay ho fantatra taty aoriana amin'ny hoe Pantone Report izay ho fanondroana ireo matihanina amin'ny sary mandritra ny taona.
El Aquamarine amin'ny tendrony farany amin'ity safidy ity. Tapa-tonaly izay efa nanjary mahazatra amin'ny karazany sy anarana samihafa. Miaraka amin'ny lanjan'ny ethereal ary tsy mahafoy ny fihavaozana dia mivoaka ho vahaolana mahomby indrindra izy io hamenoana ny ambin'ny feo mangatsiaka amin'ny paleta (na manga na maitso) mandrafitra ny safidy. Raha manohy eo amin'ny sisin-tsika mangatsiaka isika dia mahita ny Manga manga izay manaitra ny lanitra ary mampita antsika ny fahendrena sy ny fahanginan'ny maraina. Ity farany dia afaka mifanaraka tanteraka amin'ny Glacier Gray vahaolana tsy miandany na lahy na vavy ny Ambony hazo izay maitso miaina firindrana. Vahaolana tsy miandany iray hafa izay tsy azontsika odian-tsy hita titane, feno hery ary saika tsy misy lanjany. ny Scuba Amin'ny lafiny iray, mitarika antsika amin'ny toetry ny fifaliana sy ny tsy firaharahana mifamatotra tsara amin'ny fialan-tsasatra, tony. Etsy ankilany ny maitso Lucite Miorina amin'ny mazava sy madio miaraka amin'ny tonony Scuba ary mampihatra fitaomana mampiadana, mety amin'ny fibodoana toerana malalaka na habakabaka. Ny fitambaranareo tsara indrindra dia ny Manga manga satria matanjaka, mahery ary manome solidity. Izy io koa dia tena manohana ilay hevitra hoe introspection sy fitoniana tanteraka natolotry ny vadinao. Toy ny hoe tsy ampy izany, ny tonony Honeysuckle miseho amin'ny tsiro tropikaly madio indrindra azo ampiasaina miaraka amin'ny sakaizany voajanahary, vatovary.
Amin'ny faran'ny paleta hafa dia ahitantsika ny Amandy voatono, karazana tan tsy miandany izay manome fampiononana, hafanana ary fiarovana. Mampatsiahy ny masoandro amin'ny hoditra mandritra ny lohataona sy fahavaratra, ny Toasted Almond dia manolotra fifangaroana mahaliana amin'ny alokaloka toy ny Ice Strawberry, tonon-dranomasina ary feno hazavana, na ny Anarana iombonana tsindrona angovo izay mitondra fiainana ny mpamoron-tsaintsika ary miasa tsara amin'ny fiasa amin'ny fanamboarana andriamby. Etsy ankilany, ao anatin'ny tonony mafana, dia hitantsika ny Custard, mavo mamoha hafanana, fahasambarana ary fiainana. Izy io dia azo atambatra amin'ny fomba mandaitra miaraka amin'ny manga manga na ny lokon'ny divay izay mahazo ny anarana hoe Marsala ary izany dia toa mampifandray antsika amin'ny tany sy ny natiora amin'ny amplitude lehibe indrindra. Ao anatin'ireo feon-volomparasy, izay mitohy mahazo vahana amin'ny lamaody ho an'ny lehilahy, dia hitantsika ny vahaolana Lavender Herb izay miresaka avant-garde, klavista ary nostalgia sasany.
Raha tsy misy fisalasalana, dia fifantenana mahaliana izay afaka manome antsika ny sasany amin'ireo fitambarana maneho sy manome soso-kevitra indrindra sy fampitoviana chromatic. Soso-kevitra tokoa ny hakanao ny antontan-taratasy ho toy ny loharanom-pahalalana ary jereo ny tolo-kevitra hampandrosoana ny asanao. Aza adino fa ny tonony tsy miandany dia mitambatra amin'ireo vahaolana sisa ary mazava ho azy fa afaka manandrana foana ianao ary miatrika loza mety hitranga raha manandrana mitambatra vaovao.
PANTONE 19-4052 Blue Blue
PANTONE 14-1213 Almond namboarina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » TOP Colours Pantone Institute lohataona-fahavaratra 2015